ịzụta Etravirine ntụ ntụ (269055-15-4) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Etravirine ntụ ntụ
Rating: SKU: 269055-15-4. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nhazi nke Etravirine ntụ ntụ (269055-15-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Etravirine bụ ọgwụ na-egbochi nje virus nke na-egbochi mkpụrụ ndụ nje HIV (HIV) nke ịba ụba na ahụ gị. A na-eji Etravirine na ọgwụ ndị ọzọ na-agwọ nje HIV na ndị okenye na ụmụaka dịkarịa ala afọ 6. HIV na - ebute ọrịa a na - arịa n’ahụ (AIDS). Etravirine abụghị ọgwụgwọ maka nje HIV ma ọ bụ ọrịa AIDS.
Etravirine ntụ ntụ video
Ụdị ntụ ntụ nke Etravirine
aha: Etravirine ntụ ntụ
Usoro Molecular: C20H15BrN6O
Molekụla arọ: 435.284
Ura Etravirine ntụ ntụ na ojiji
Aha aha: Integrity
Aha njirimara: Etravirine powder (Pronunciation: E tra VIR een)
Etravirine ntụ ntụ Usage
Etravirine ntụ ntụ bụ ọgwụ ọgwụ edere na ọgwụ ndị ọzọ iji gwọọ ọrịa nje ụmụ mmadụ (HIV) na ndị mmadụ dịkarịa ala afọ 6. A na-eji ntụ ntụ nke etravirine mee ihe mgbe ọgwụ ndị ọzọ enwebeghị ihe ịga nke ọma. Etravirine ntụ ntụ bụ ụdị ọrịa HIV nke a na-akpọ onye na-emeghị ihe na-emechi transcriptase inhibitor (NNRTI). Ọ na-arụ ọrụ site n'ịkwụsị nje HIV site na nkerisi ma na-agbasa.
Nri a na-abịa na mbadamba ụrọ ma na-ejikarị ya ugboro abụọ kwa ụbọchị, mgbe nri gasịrị. A ghaghị ikpochapu ntụ ntụ nke Etravirine kpamkpam na iko mmiri.
Mmetụta ndị a na-ahụkarị gụnyere tingling, ụfụ, ma ọ bụ ihe mgbu na aka ma ọ bụ ụkwụ, na afọ ọsịsa.
Kedu ihe nyocha nke Etravirine ntụ ntụ
Okenye na-emekarị agadi maka nje HIV
200 mg ugboro abụọ n'ụbọchị mgbe nri
Usoro Ọrịa Pediatric na-emekarị maka nje HIV
6 na-erughị afọ 18:
Ngwakọta 16 na-erughị 20 kg: 100 mg ugboro abụọ ugboro abụọ n'ụbọchị nri
Ngwakọta 20 na-erughị 25 kg: 125 mg ugboro abụọ ugboro abụọ n'ụbọchị nri
Ngwakọta 25 na-erughị 30 kg: 150 mg ugboro abụọ ugboro abụọ n'ụbọchị nri
30 kg ma ọ bụ karịa: 200 mg ugboro abụọ n'ụbọchị mgbe nri
Enweghi mgbanwe ka akwadoro.
Mmetụta ọrịa na-adịghị na ya (ma ọ bụ B) nke nwa-Pugh ma ọ bụ nke dị ala: Ọ dịghị mgbanwe a tụrụ aro.
Nsogbu na-egbuke egbuke na-ekesa (Class Child-Pugh C): Data adịghị
Kedu ka Etravirine uhie si arụ ọrụ
A na-ejikọta ntụ ntụ nke etravirine na ọgwụ ndị ọzọ iji na-agwọ ọrịa nke nje virus na-akpata immunodeficiency (HIV). Ọrịa nje bụ nje nke na-akpata ọrịa enweghi ike ọgwụgwụ (AIDS). A na-enye ndị ọrịa ndị natara ọgwụ HIV n'oge gara aga.
Etravirine ntụ ntụ agaghị agwọ ma ọ bụ gbochie nje HIV ma ọ bụ ọrịa AIDS; Otú ọ dị, ọ na-enye aka mee ka nje virus ahụ ghara ịmalitegharị ma yie ka ọ ga-akwụsị ngwa ngwa nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Nke a nwere ike inyere oge ụfọdụ nsogbu metụtara ọrịa AIDS ma ọ bụ nje HIV. Etravirine ntụ ntụ agaghị egbochi gị ịgbasa nje HIV na ndị ọzọ. Ndị na-aṅụ ọgwụ a nwere ike ịnọgide na-enwe nsogbu ndị ọzọ metụtara ọrịa AIDS ma ọ bụ nje HIV.
Ihe siri ike, nwere ike ibi ndụ, na mmeghachi ahụ akpụkpọ anụ. A na-akọkwa ihe mmeghachi omume nke ịdị na-emepụta ihe (nke eji ọkụ ọkụ, nchọpụta nke iwu, na mgbe ụfọdụ na-eme ka ọ bụrụ ihe ndị ọzọ), gụnyere imeju umeji. Ihe kachasị emekarị n'ime izu 6 maka nhazi usoro ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na ihe ịrịba ama ma ọ bụ ihe mgbaàmà nke mmeghachi ahụ akpụkpọ anụ ma ọ bụ mmeghachi omume nke ọbara na-etolite, a ghaghị ịkwụsị ọgwụgwọ Etravirine ntụ ntụ ozugbo, ọnọdụ nlebara anya (gụnyere ime transaminases) ka ekwesiri nyochaa, yana usoro ọgwụgwọ kwesiri ịmalite. Nkwụsị na ịkwụsị Etravirine ntụ ntụ na-esote mmalite nke oké ọkụ ọkụ nwere ike ịkpata mmeghachi omume egwu ndụ.
Etravirine ntụ ntụ nwere ike iso ọtụtụ ọgwụ na-emekọrịta ihe na-akpata ọkwa plasma gbanwere na ọgwụ ndị ọzọ ma ọ bụ nke Etravirine ntụ ntụ. Ekwesịrị inye ndị ọrịa ndụmọdụ ka ha kọọ ọgwụ niile ha na-a takingụ n'otu oge, gụnyere ọgwụ ndị na-edeghị ọgwụ na ọgwụ nri / nri ọgwụ / ọgwụ; karịsịa St. John's wort.
Ọrịa ọrịa na-adịghachighị adịghachi na-eme n'oge ọgwụgwọ antiretroviral. Ndị ọrịa na-anabata ọgwụgwọ nwere ike ịmepụta mkpesa na-emetụ n'ahụ na ọrịa na-adịghị mma ma ọ bụ nke na-adịghị mma ma chọọ nyocha na ọgwụgwọ.
Enwere ike iguzogide nje HIV n'etiti ndị na-emegharị transcriptase na-enweghị ntụpọ (NNRTI) mana enyochabeghị ya. A na-atụ anya iguzogide ndị ọzọ NNRTI na-esochi ọdịda virologic na usoro Etravirine nke nwere ntụ ntụ maka ikewapụ virologic. E kwesiri iji nlezianya mee nhọrọ nke ndị na-egbochi ọrịa nje maka ọgwụ ọgwụ onye ọrịa.
Jiri ya na ndị ọzọ na-ahụ maka nje antiretroviral ga-eme ka nzaghachi ọgwụgwọ likelihoodof. Ndị ọrịa nwere ahụhụ na-adabaghị na usoro NNRTI nwere ike iji Etravirine ntụ ntụ ma ọ bụ naanị nucleoside / nucleotide reverse transcriptase inhibitors.
Enweghị nchebe na nrụpụta ọrụ na ndị ọrịa na-agwọ ọrịa.
E kwesịrị inye nlebara anya nke ọma na nhọrọ nhazi zuru oke, ntinye ederede nke ịnye ọgwụ, ịnye ozi, na ntụzị ntụziaka iji belata ihe mgbochi ịme ọgwụgwọ, nkwụsịtụ, na ịdabere.
Powder Powder nke Etravirine
Raw Etravirine ntụ ntụ Marketing
Eke Etravirine ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
N'okwu ndị na-adịghị ahụkebe, Etravirine ntụ ntụ nwere ike ime ka ọnọdụ na-ebute nkwụsị nke anụ ahụ skeletal, nke na-eduga n'ọkpụkpụ akụrụ. Kpọọ dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na enwere mgbu, obi ọmịiko, ma ọ bụ adịghị ike, ma ọ bụrụ na ị nwere ahụ ọkụ, ike gwụrụ ọhụrụ, na urine agba oyi.
Kwụsị ịra Etravirine ntụ ntụ ma kpọọ dọkịta gị n'otu oge ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta dị egwu dịka:
ọkụ, ụfụ, nkwarụ ahụ ike, nkwonkwo ma ọ bụ mgbu ahụ, ọnụ na-egbu mgbu, ike gwụrụ, ma ọ bụ ihe ịrịba ama ọ bụla ọzọ nke ọrịa ọhụrụ;
obi mgbu, enweghi ume;
mgbagwoju anya, njide;
urinating obere karịa na mbụ ma ọ bụ na ọ bụghị ma ọlị, ọzịza, uru ngwa ngwa;
ngwa ngwa obi, mmụba dị elu, egwu, nsogbu ihi ụra (ụra nke ụra), inwe nchegbu ma ọ bụ iwe;
akpịrị afọ ọsịsa, ụkọ ihe na-enweghị atụ, mgbanwe nke oge nwoke, nkwarụ, enweghị mmasị na mmekọahụ;
ọzịza na olu gị ma ọ bụ akpịrị (gbasaa thyroid);
adịghị ike ma ọ bụ mmetụta mkpịsị aka na mkpịsị aka gị ma ọ bụ mkpịsị aka gị;
nsogbu na nhazi ma ọ bụ anya anya, nsogbu na-ekwu okwu ma ọ bụ ilo;
akwa ụta azụ, ọnyá nke eriri afo ma ọ bụ njikwa obi;
nausea, mgbu nke afo elu, agụụ nke agụụ, mmamiri gbara ọchịchịrị, ụrọ ụrọ, jaundice (yellowing nke anụ ahụ ma ọ bụ anya);
ihe ịrịba ama mbụ nke ụdị ọkpụkpọ anụ ọ bụla, n'agbanyeghị ihe dị nro; ma ọ bụ
mmeghachi ahụ siri ike - ahụ ọkụ, akpịrị akpịrị, ọzịza na ihu gị ma ọ bụ ire gị, na-ere ọkụ n'anya gị, nhụjuanya anụ ahụ, na-esochi ọkụ ọkụ na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ na-acha odo odo na-agbasa (karịsịa na ihu ma ọ bụ ahụ dị n'elu) ma na-akpata ọnya na ịkpụpụ.
enweghi obi uto na aka gi ma obu ukwu;
oke uju, nro;
iwe afọ, afọ ntachi, nrịkasi obi, ọnụ akọrọ;
nrọ ndị a na-ahụkebe; ma ọ bụ
mgbanwe n'ụdị abụba ahụ ma ọ bụ ọnọdụ ya (karịsịa n'akụkụ aka gị, ụkwụ gị, ihu gị, olu gị, ara gị na n'úkwù gị). ”
Esi zụta Etravirine ntụ ntụ si AASraw